Miisaaniyadda 2020: Waa Sidee Qoondada Mushaaraadka ee Grade A, B, C iyo D? – Goobjoog News
Soomaaliya waa dalka keliya ee dunidan ku yaala ee shaqaalaha rayidka ah ee Grade A-gu ama maamulka ay la egyihiin marka la isku daro tirada shaqaalaha kale ee B, C, iyo D. Shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka rasmi ahaan tiradu waa 5402, oo 2, 500 ka mid ah yihiin Grade A, waana kuwa qaata mushaarka ugu badan!
Miisaaniyadda 2020, Grade A, oo sida caadada ah kaalintoodu maamul uun tahay waxay qaadan doonaan lacagta ugu badan iyaga oo tiro ahaan la eg tirada guud ee shaqaalaha kale, taasi oo ku tusineysa musiibo ah in isla ekaadaan tirada dadka talada ka go’do oo maamul ah kuwii la amrayey!
Sida Ay Tahay Qoondada 2020:
Grade A: Waxay miisaaniyadda 2020 ku leeyihiin $22,482,180, taas oo ka badan xataa marka la isugeeyo tirada lacagta ku soo aadeysa shaqaalaha B iyo C.
Grade B: oo tiro ahaan ka kooban 1,401 waxaa loo qoondeeyey mushaar dhan: $7,021,800.
Grace C: oo tiro ahaan gaaraya 1012 waxay heli-doonaan $4,043,160.
Grade D: oo tiradu tahay 489 iyagu mushaarkoodu waa 1,278,496.
Waxaa jiro shaqaale kale oo dowladda u qoratey latalin, tababar IWM kuwaas oo gaaraya ilaa 331, laakin sidoo kale waxaa u badan Grade A oo gaaraya (178), lacagta ay mushaar u heli doonaan waa $10.7 million.
Shaqaalaha rayidka ee ku jira Fulinta, sharci dejinta iyo qeybo kale oo ay ka mid yihiin xafiisyada Madaxweynaha, ra’isul wasaaraha, xafiiska baarlamaanka, maaliyadda, garsoorka iyo xataa hanti-dhowrka waxay gaarayaan tiro ahaan 2,923 oo weliba 1,392 ay yihiin Grade A, qaataanna mushaarka ugu badan.
Waxaa ku xiga waaxda dhaqaalaha oo ay hoostagaan wasaarado sida Biyaha iyo Tamarta, Isgaarsiinta, Warfaafinta, Dekadaha, ganacsiga waxaa jooga shaqaale dhan 1,733 oo hadan intooda badan waa Grade A.
Qeybta ugu dambeysa waa difaaca iyo amniga oo ah 155 qof iyo qeybta bulshada ee waxbarashada, caafimaadka iyo Sportiga oo ay joogaan 591. Sida caadada ah waxaa u badan kuwa Grade A.
AFRICOM Oo Ka Hadashay Duqeyn Ka Dhacday Shabellaha Hoose
Dagaal Ka Dhacay Lamu